Bilaogera Shiliana: Inona no Nitranga Tamin’ny Bilaogy Ara-politika? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2017 14:06 GMT
Nanoratra i Roberto Arancibia, bilaogera fanta-daza ao Shily fa folo andro sisa dia ho tonga ny fifidianana filoham-pirenena sy parlemantera ary tokony hafampàna ny bilaogy politika, saingy … .nahoana no tsy izany ry zareo?
Manaiky ny ankamaroan'ireo fanehoan-kevitra fa tsy hitan'ny daholobe na hoe koa “sangany” ny bilaogy. Nilaza i Maria Elena fa “tsy liana amin'ny politika ny tanora”, raha mihevitra kosa i Christian fa tsy dia manana tohan-kevitra resahana ny kandidà, ka tsy mila mampiasa bilaogy izy ireo.
“Mampiasa ny bilaogin'izy ireo ny mpanao politika mba handefa lahateny sy filazana an-gazety”, hoy i Angela. Ary Pato M indray nilaza fa “satria faran'ny taona izao”.
Mihevitra i Carlos Valencia fa mahazatra ny mpanao politika no tara amin'ny famaliana ireny revolisiona kely ireny. Nilaza izy sy Nadia fa tsy misy kandidà manome demaokrasia ifarimbonana tena izy, raha nanoritra kosa i Carlos fa tsy maintsy “manao famahoana ny demaokrasia” isika.